Ny vahaolana Vetting vahiny mahavariana indrindra
Be dia be ny tatitra momba ny trano rava taorian'ny fety tamin'ny famandrihana Airbnb tao amin'ny media mahazatra. Fa maninona izy ireo no mahazo ny sain'ny media? Satria indrisy fa tsy dia fahita izy ireo. Ny antoko atolotry ny vahiny mandritra ny fotoana fohy dia mety handany vola an'arivony maro, ary amin'ny tranga maro dia tsy dia kely ny vola azon'ny tompona fandraisam-bahiny ary mila manaraka ny volavolan-dalàna iray manontolo izy ireo - ny fanamboarana, ny fidiram-bola very, ny famindran-toerana ny famandrihana manaraka ary mitohy ny lisitra ary amin'ny…
Ankoatry ny fety toy izany, ny fahasimbana ateraky ny fijanonan'ny vahiny mandritra ny tapa-bolana na volana dia mety mihoatra lavitra ny petra-piarovana tazomin'ny mpampiantrano. Matetika io mpampiantrano io no manomboka miahiahy momba ny hoe iza marina ny vahinin'izy ireo ary ny fomba azon'izy ireo atao amin'ny famerenana ny sarany avy amin'ny vahinin'izy ireo. Amin'izay fotoana izay dia tara loatra matetika.
Ahoana no ahafahan'ny Zeevou's Guest Vetting manampy?
Ny mpampiantrano dia mila mavitrika amin'ny fandinihana sy fankatoavana ny vahininy alohan'ny hisarahany amin'ny lakile. Ankoatry ny fiantohana izany fandoavam-bola no angonina amin'ny alàlan'ny fomba mampihena ny mety hisian'ny chargebacks, mpampiantrano maro koa no mitaky fametrahana vola fandoavam-bola alohan'ny hahatongavany. Ankoatr'izay, ny vahiny dia mety mitaky ny fanomezana ny antsipirian'ny fifandraisan'izy ireo sy ny antontan-taratasin'izy ireo. Na dia fanao mahazatra eo amin'ny sehatry ny hôtely aza ny manangona izany fampahalalana izany amin'ny mpitsidika rehefa miditra, mpampiantrano maro no mamela ny tenany hisokatra amin'ny risika tsy ilaina amin'ny tsy fanatanterahana izany. Ankoatr'izay, matetika ny vahiny dia tsy voatery manao sonia taratasy iray (na manome ny mitovy aminy nomerika) alohan'ny hanomezana azy ireo lakile mankany amin'ny trano fialantsasatra.
Ho an'ireo mpampiantrano izay nanandrana nanome toky ireo boaty rehetra talohan'ny nahatongavany dia mazava fa sarotra be ny manara-maso ny zava-drehetra, indrindra amin'ny ambaratonga. Izany dia manahirana ny manome antoka fa ny fanalahidy dia atolotra foana raha vao voakarakara ny vola sy ny mpitsabo arahin'antoka.
Ny ekipanay ao Zeevou dia namolavola fomba maro hanampiana ireo mpampiantrano hitazona ny fananany ho azo antoka ary hampihenana ny mety hisian'ny fandaniana ara-bola amin'ny fanekena ny famandrihana. Na dia mety niasa mafy dia mafy aza ianao hahazoana ny famandrihana voalohany ary mety maniry ny hahazo ny vola aloa ao amin'ny kaontinao, ilaina izany mba hahazoana antoka fa tsy hahazo valiny ianao.
Noho izany, ankoatry ny fanangonana vola amin'ny alàlan'ny rohy azo antoka 3-D, Zeevou's Dingana fanamafisana ny famandrihana 5-dingana manampy anao koa hijerena tsara ny vahininao. Zeevou's integration amin'ny Azo zahana mamela anao tsy hahazo ny fepetra sy ny sonia nosoniavin'ny vahiny fotsiny, fa koa hanangona karapanondro betsaka araka izay itiavanao azy. Ohatra, ankoatry ny kopian'ny pasipaoro dia azonao atao ihany koa ny manangona porofo misy ny adiresy hijerena ny adiresy nampiasain'izy ireo handefasana ny takiana 3-D Fanamarinana momba ny fandoavam-bola na ny petra-bola azo antoka alohan'ny alàlan'i Zeevou.
Zeevou dia mamela anao hanara-maso ny fandrosoan'ny dingana tsirairay amin'ny dingana fanamafisana ny famandrihana, ao anatin'izany ny fanamarinana ny vahininao. Afaka mahita ianao raha vao nalefa ny sonia sy ny fepetra soniavina, ary vantany vao nahavita ilay valopy azo tsidihina ilay vahiny. Aza manahy fa ny torolàlana momba ny fizahana tena ihany dia tsy mbola halefa, na dia averin'izy ireo aza ilay valopy misy ny sarin'ny Cocker Spaniel ankafizin'izy ireo nakarina ho solon'ny ID.
Tsy mahazo miditra amin'ny trano ny vahiny raha vantany vao voamarinao ny antontan-taratasy rehetra natolotr'izy ireo, ary nohamarininao ny mombamomba azy ireo. Hiantohana ny traikefa vahiny dia mahafinaritra araka izay azo atao, hahatsiarovan'i Zeevou ity fampahalalana ity, ary amin'ny manaraka ny famakiana boky ho an'ny vahiny, dia tsy ho takiana intsony izy ireo amin'ny fanandramana fanindroany.
Raha misy vahiny manimba ny fanananao na manitsakitsaka ny lalàna mifehy ny tranonao, azonao atao ny manamarina ny mombamomba azy ireo ary mampiditra fanamarihana hampahatsiahy anao fa tsy maniry hampiantrano ny vahiny indray ianao raha manandrana mamandrika iray hafa amin'ny fanananao.